Qaxwada, sonkorowga iyo dhiig karka .. Sayniska muxuu ka yidhi"xallin cajiib ah" – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Qaxwada, sonkorowga iyo dhiig karka .. Sayniska muxuu ka yidhi”xallin cajiib ah”
Qaxwada, sonkorowga iyo dhiig karka .. Sayniska muxuu ka yidhi”xallin cajiib ah”
Sonkorowga iyo dhiig karka ayaa ah laba dhibaato caafimaad oo guud oo dunida maanta ah, oo saameeya malaayiin adduunka ah, laakiin daraasad cusub ayaa bixin karta fursad cajiib ah.
Daraasad cusub ayaa shaaca ka qaaday in qaxwaha uu yareyn karo fursadaha uu kugu dhici karo nooca 2aad ee sonkorowga, dhiig karka, iyo xitaa wadne xanuun.
Waxay muujisay in cunista ilaa 4 koob oo qaxwaha ah maalintii ay si weyn u yareyn karto halista dhiig karka iyo sonkorta, waxayna xitaa ogaatay in xitaa kafee la gooyey ay yeelan karaan faa’iidooyin caafimaad.
Baarayaasha jaamacadaha Navarre ee dalka Spain iyo Catania ee dalka Talyaaniga ayaa helay xiriir ka dhexeeya isticmaalka kafeega iyo cudurka dheef-shiid kiimikaadka, Daily Mail ayaa werisay.
Cudurka dheef-shiid kiimikaad ee loo yaqaan ‘Metabolic syndrome’, ama ‘MetS’ ‘, waa isku-darka cilado caafimaad oo badanaa keena culeys xad dhaaf ah iyo cayil. Waxay kordhiyaan halista cudurada wadnaha iyo kaadi macaanka, waxayna ku sii badanayaan da’da.
Daraasadaha ayaa muujinaya in cunista saddex ilaa afar koob oo qaxwa maalintii ay la xiriirto hoos u dhac, qiyaastii 25 boqolkiiba, nooca 2 ee sonkorowga, marka la barbar dhigo inaadan cunin ama cunin kaliya laba koob isla muddadaas.
Kumanaan kiisas oo cusub oo la ogaadey oo ka kala yimid 8 dal oo kala duwan ayaa la baarey waxaana ay muujiyeen xiriir rasmi ah oo togan oo ku saabsan cabitaanka qaxwada iyo halista la xiriirta nooca 2aad ee sonkorowga.
Koob kasta oo qaxwo ah, oo leh ugu badnaan 6 ama 8 koob maalintii, waxay la xiriirtaa boqolkiiba 5 illaa 10 yareynta halista cudurka.
Baadhitaan uu sameeyay borofisar ku xeel dheer Giuseppe Grosso oo ka tirsan jaamacadda Catania ayaa soo jeedinaya in polyphenols ay ka buuxaan antioxidant kafee kafee laga yaabo inay mas’uul ka tahay.
Waxa kale oo uu dib u eegay cilmi baaris hore oo soo jeedisay in qaxwada qaadashada dhexdhexaadka ahi ay ka caawiso yareynta halista cudurka wadnaha, kansarka iyo sonkorowga nooca 2.
Daraasad ayaa sidoo kale lagu cadeeyay in cabitaanka kafee qaxwaha ah 3 ilaa 5 koob maalintiiba ay la xiriirto 15% yareynta halista cudurka wadnaha.
Previous articleAmiirka Boqortooyada Sacuudiga oo sii wadaa booqasho rasmiga ah ee uu ku joogey imaaraadka carabta
Next articleGolaha Wakiiladda Somaliland oo Cod Aqlabiyad ah ku Ansixiyay Miisaaniyadda Qaranka 2020
Kiisaska Kenya ayaa gaaraya ilaa 700 Covid19